Madaxweynayaashii Hore Oo U Digay Dawladda Federaalka – Banaadir weyne
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa uga digay dawladda Federaalka inaan muwaadiniinta dulmi lagu samaynin, waxaana uu sheegay inaan sharciga lagu tuman. Madaxweynaha ayaa jeediyey hadallo culus kuwaasi oo ku jeeday dawladda federaalka.
Dhinaca kale madaxweyneihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadlay ayaa beeniyey hadallo kasoo yeedhay madaxweynaha Maamul Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ahaa in garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ay biyo ku jireen taasina ay keentay in lagu taliyo inaan diyaarad weyni ka degin garoonka.
Wafdiga ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saaka tagay magaalada Beledweyne.
Shariif Sheekh Axmed ayaa hoggaamiya Madashada Xisbiyada Qaran. – VOA Somali